Atụla egwu ọdịda. Mụta ihe na ya ma na-aga. Istnọgidesi ike n'ihe bụ ihe na-eweta ịdị mma. - Amaghi ama - Quedia Pedia
Ọdịda bụ ntọala nke ihe ịga nke ọma. N’enweghị ọdịda, ọ ga-esiri gị ike ịnụ ụtọ uto nke ihe ịga nke ọma. Ọ dị mma, enweghi ndị dị otu a bụ ndị na-ahụbeghị ọdịda ọ bụla otu ugboro na ndụ ha. Na nkenke, odighi adi ndu adigh adi. Yabụ, ọ ga - abụ nhọrọ kacha mma maka gị ịmebi ngwa ọrụ gị nke ihe ịga nke ọma.
Anyị maara na ọdịda adaala obi gị ma mee ka ị chee na ihe niile agwụla. Agbanyeghị, ọ bụ otu n’ime ndị nkuzi kachasị mma na ndụ gị. Enwere ọtụtụ nkuzi na ndụ gị nke ị ga - amụta naanị ma ọ bụrụ na ị hụla ọdịda.
Yabụ, ị ga - ahụ na ọ bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa ga - enyere gị aka ịmụ ọtụtụ ihe gbasara ndụ. Yabụ, ọdịda dị ezigbo mkpa ma a bịa n’iru ọma nke ndụ gị.
Ihe ọzọ ị ga - ebu n’uche bụ na n’agbanyeghi ọnọdụ dị, ịgaghị akwụsị akwụsị. I ghaghi ibi ndu gi. A ga-enwe ọnọdụ mgbe ọ ga - adị gị ka nkwụsị, mana ịkwesighi ịkwụsị.
Ikwesiri iburu otu ihe n’obi gi na iguzosi ike bu isi ihe na-aga n’ihu. Ikwesiri ịnọgidesi ike na ndụ gị dịka ọ bụ naanị ụzọ nke ga - eduga gị ruo ebumnuche gị. Ọzọkwa, ọ ga-eme ka obi sikwuo gị ike ma nyere gị aka ịnọgide na-ebi ndụ gị. Na mgbakwunye, ọ bụ otu n’ime ụzọ kachasị mma iji nweta obi ụtọ ebe ọ bụ ihe kachasị mkpa.
Yabụ, n'agbanyeghị ihe ọ bụla merenụ, ị kwesịrị ịghara ida mkpali gị. Ma ọ bụ ihe ọzọ, ọ ga-esiri gị ike iru ebe ịchọrọ. Ọ bụrụ na ịkwụsị onwe gị ịgbalị, ọ nweghị ụzọ ị ga-esi mezuo ebumnuche gị. N'ụzọ dị otu a, ị gaghị ahụ ihe ọ bụla ma ọ bụghị ọdịda.
Atụla Egwuregwu Kwuru
Egwu nke Failure Quotes
Mụta Site na Nkọwapụta Mmejọ
Quenence Inspirational Quotes
Nhota Banyere Odida Na Odighi Ike
Na-ekwu okwu banyere Egwu nke ọdịda
Quotita Banyere Nkuzi Site Mpu
Kwuru okwu On Persition and Determination
I nwere ebumnuche tupu mmadụ ọ bụla nwee echiche. - Amaghi ama
I nwere ebumnuche tupu mmadụ ọ bụla nwee echiche. - Isi okwu ndi amaghi ama:
Esoghachila azụ ka ihe mee gị. Pụta ma mee ihe. - Amaghi ama
Ọtụtụ mgbe, anyị anaghị eji ihe akpọrọ ihe. Nke a bụ ihe agaghị eme eme. Ị kwesịrị…
Okwukwe dịka WiFi. Onaghi anaghi ahu anya, mana o nwere ike ijiko gi na ihe ichoro. - Amaghi ama
Okwukwe di ka Wi-Fi, nke putara na obu ezie na ike ya adighi ahu anya, ma o nwetala ike…